Colace vs. Dulcolax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Fialam-Boly Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Community, Company Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Vaovao, Wellness Fanatanjahan-Tena Mavesatra News Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Colace vs. Dulcolax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Colace vs. Dulcolax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Colace sy Dulcolax dia fanafody roa tsy azo ampiasaina (OTC) izay manampy amin'ny fitsaboana ny fitohanana. Ny fivontosana dia aretina amin'ny gastrointestinal izay miavaka amin'ny fananana fihetsiketsehana tsinay telo na vitsy isan-kerinandro, seza mafy na mivonto, seza sarotra aleha, na ilay fahatsapana fa tsy nandalo tanteraka ny fipetrahana ianao. Ny fahazarana tsinay dia miovaova arakaraka ny olona. Ireo marary tratry ny fitohanana dia mety mamaritra ny fahatsapana fivontosana na fanerena ao an-kibony.
Ny fitohanana dia mahazatra ary mety hisy fiatraikany amin'ny zazakely sy ny ankizy ary ny olon-dehibe. Tombanana ho 16 amin'ny 100 amerikana 100 mijaly noho ny fitohanana. Misy vondrona marary sasany izay matetika mijaly amin'ny fitohanana bebe kokoa. Anisan'izany ireo olon-dehibe, vehivavy, tsy Kaokazy, marary mihinana sakafo tsy misy fibre, ary marary amin'ny fanafody sasany.
Raha tsy hampitaha an'i Colace sy Dulcolax fotsiny ity lahatsoratra ity, dia mazava ho azy fa misy isan-karazany ny laxatives tsy azo ampiasaina. Mitadiava torohevitra ara-pitsaboana matihanina amin'ny fahasalamana hahalalanao izay karazana laxative mety ho anao.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Colace sy Dulcolax?
Colace (docusate sodium) dia fanafody over-the-counter ampiasaina hitsaboana sy hanamaivanana ny soritr'aretin'ny fitohanana. Colace dia miasa toy ny surfactant ary mampihena ny fihenjanan'ny solitany sy rano ao amin'ny fipetrahany. Io dia mamela ny lipida sy ny hamando hiditra ao amin'ny seza, ka hiteraka sefo malefaka kokoa izay afaka mihetsika mora kokoa amin'ny alàlan'ny lalan-dra. Colace dia sokajiana ho toy ny mpanamory seza fa tsy raisina ho laxative satria tsy mandrisika mivantana ny fivezivezena. Mety haharitra iray na telo andro vao hiseho ny fanalefahana ny fivalanana, noho izany, Colace dia tsy manome fanamaivanana haingana ny soritr'aretin'ny fitohanana. Colace (inona ny Colace?) Dia misy amin'ny kapsily malefaka 50 mg sy 100 mg am-bava ary 10 mg / ml ary 60 mg / 15ml vahaolana am-bava. Misy ihany koa ny supositories glycerine sy ny fatotra amin'ny fipetrahana ary ny fangaro laxative azo alaina amin'ny anaran'ny varotra Colace.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Colace?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Colace ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Dulcolax (bisacodyl EC) dia fanafody over-the-counter izay ampiasaina hitsaboana sy hanamaivanana ny soritr'aretin'ny fitohanana. Dulcolax dia laxative ary miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana mivantana ny hetsika peristaltika amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny mucosa amin'ny tsinay. Io fanentanana io dia mamindra ara-batana ilay seza amin'ny alàlan'ny taratasy mivalona. Dulcolax dia mamokatra haingana kokoa ny vokany tadiavina noho ny Colace, matetika ao anatin'ny 8-12 ora miaraka amin'ny fitantanana am-bava. Dulcolax (Inona ny Dulcolax?) Dia azo alaina ao anaty takelaka 5 mg sy 10 mg mifono enteric ary koa suppository 10g an'ny rectal. Misy fanalefahana seza sy vokatra hafa azo ampiasaina amin'ny anaran'ny varotra Dulcolax.
Kilasy zava-mahadomelina Fanamafisana ny fatana Laxative manaitaitra
Iza no anarana mahazatra? Sôdema Docusate Bisacodyl EC
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Softgel am-bava, vahaolana am-bava Takelaka misy fonosana am-bava, famelomana boribory
Inona ny fatra mahazatra? Softgel 100 mg indroa isan'andro, max 300 mg isan'andro Supository 10 mg iray isan'andro, max 3 andro isan-kerinandro
Mandra-pahoviana ilay fitsaboana mahazatra? Herinandro na latsaka, raha tsy toromarika avy amin'ny mpitsabo iray hafa Herinandro na latsaka, raha tsy toromarika avy amin'ny mpitsabo iray hafa
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? Ankizy 2 taona no ho miakatra, olon-dehibe Ankizy 6 taona no ho miakatra, olon-dehibe
Toe-javatra tsaboin'i Colace sy Dulcolax
Colace dia aseho amin'ny fitsaboana ny fitohanana sy ny fisorohana azy. Ny fitohanana tsindraindray dia tokony hivaha ao anaty herinandro. Colace dia azo antoka amin'ny ankapobeny fa ho entina maharitra miaraka amin'ny fitarihan'ny mpitsabo iray ary mety omena hisorohana ny fitohanana mifandraika amin'ny fanafody hafa na fepetra fantatra fa miteraka fitohanana.
Ny Dulcolax dia tsy aseho afa-tsy amin'ny fitsaboana ny fitohanana tsindraindray. Ny fomba fiasa mampihetsi-po dia mety hiteraka tsy fahazoana aina sasany. Tokony hampiasaina hatramin'ny herinandro monja izany raha tsy toromarika avy amin'ny mpitsabo matihanina.
toe-javatra mofo Dulcolax
Fisorohana ny fitohanana ENY tsy
Fitsaboana ny fitohanana ENY Eny (tsindraindray)
Mahomby kokoa ve i Colace na Dulcolax?
Ireo akora mavitrika ao amin'ny Colace sy Dulcolax dia tsy nampitahaina tamin'ny fanandramana mivantana ny fitsapana klinika momba ny fahombiazan'ny fitsaboana ny fitohanana.
Misy antony maromaro momba ny zava-mahadomelina tsirairay ao an-tsaina rehefa misafidy izay mety aminao. Ny antony iray dia ny fahitanao faingana ny fanamaivanana. Ny suppositories Dulcolax dia matetika miasa ao anatin'ny ora vitsivitsy fa mety hiteraka tsy fahazoana aina sasany. Ny takelaka Dulcolax dia mazàna manome fanampiana amin'ny alina, ao anatin'ny 8 ka hatramin'ny 12 ora. Colace dia mety maharitra iray na telo andro vao mamorona hetsika tsinay.
Ny endrika dosie dia singa iray lehibe ihany koa. Ho an'ny marary sasany, ny fampidirana supository mitombo dia mety ho sarotra na tsy mahazo aina kokoa noho ny zakany. Na dia miasa haingana aza ny supositories, dia mety aleon'ireo marary mihinana endrika fatra am-bava.
Ny mpitsabo anao ihany no afaka manapa-kevitra izay mety aminao. Colace sy Dulcolax dia tsy tokony horaisina mandritra ny herinandro mahery raha tsy nahazo alalana avy amin'ny dokotera.
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Colace vs. Dulcolax
Colace dia fanafody tsy azo hamidy izay matetika tsy rakotry ny drafitry ny fiantohana zava-mahadomelina na Medicare. Amin'ny salanisa, 15 $ ny tavoahangy Colace iray. Raha manana fanafody ianao dia afaka mandoa vola $ 4.26 miaraka amin'ny tapakila amin'ny SingleCare.
Dulcolax dia fanafody tsy azo hamidy izay matetika tsy rakotry ny drafitry ny fiantohana zava-mahadomelina na Medicare. Ny vidin'ny antsinjarany eo amina boaty 12-isa an'ny supositories Dulcolax dia manodidina ny $ 12. Azonao atao ny mandoa $ 6.10 miaraka amin'ity coupon avy amin'ny SingleCare ity, raha mahazo fanafody avy amin'ny mpitsabo anao.
Voasaron'ny fiantohana mahazatra? tsy tsy
Voasaron'ny Medicare Fizarana D? tsy tsy
Fatra mahazatra Softgels 100, 100 mg 12, 10 mg supositories
Copie Medicare mahazatra N / A N / A
Sarany SingleCare $ 4- $ 14 $ 5- $ 15
Ny voka-dratsin'ny Colace vs. Dulcolax
Tsy fahita firy ny zava-dratsy aterak'i Colace. Ny cramping gastrointestinal malefaka dia mety hitranga. Amin'ny fatra avo kokoa sy / na fampiasana maharitra, dia mety hitranga ny fivalanana sy ny fivalanana. Ny fanomanana ranon-javatra dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny sisin'ny tenda raha tsy voadona isaky ny torolalan'ny mpanamboatra.
Ny dulcolax amin'ny fatra mahazatra mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fitsaboana dia mety hiteraka fikorontanan'ny kibo, tsy fahalemena, maloiloy ary mandoa. Ny Dulcolax ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra dia mety miteraka fivalanana ary mitarika fahaverezan'ny fluid sy electrolyte. Izany dia mety hiteraka hypokalemia (haavon'ny potasioma ambany) izay mety hampidi-doza. Ny fampiasana maharitra dia mety hitarika fiankinan-doha ihany koa, ary mety hipoitra ny fitohanana aorian'ny fijanonan'ny fanafody.
Ity lisitra ity dia mety tsy misy ny voka-dratsy mety hitranga rehetra. Azafady mba mifandraisa amin'ny mpitsabo anao momba ny lisitra feno.
Famonoana gastrointestinal ENY Tsy voafaritra ENY Tsy voafaritra
aretim-pivalanana ENY Tsy voafaritra ENY Tsy voafaritra
Fahalemena tsy N / A ENY Tsy voafaritra
maloiloy tsy N / A ENY Tsy voafaritra
Mandroa tsy N / A ENY Tsy voafaritra
Tsy fifandanjan'ny electrolyte tsy N / A ENY Tsy voafaritra
Loharano: Colace ( DailyMed ) Dulcolax ( DailyMed )
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Colace vs. Dulcolax
Colace sy Dulcolax dia tokony ampiasaina am-pitandremana amin'ireo marary amin'ny diuretics loop toy ny furosemide na torsemide. Ireny diuretika ireny dia mandany potasioma, ary ny fatiantoka potasioma ampiarahana amin'ny tsy fifandanjan'ny electrolyte mety ho vokatry ny fivalanana rehefa mandray Colace na Dulcolax dia mety hitarika hypokalemia.
Colace dia tsy tokony alaina amin'ny menaka mineraly satria afaka mampitombo ny fitrandrahana menaka mineraly izany. Ny fivontosan'ny tsinay, ny atiny, ny spleen ary ny lymph dia mety hitranga avy amin'ny fametrahana menaka mineraly amin'ireo tranokala ireo izay mitarika fihetsika amin'ny vatana vahiny.
Dulcolax dia mifono enteric ary natao hampihemotra ny fandravana. Ny fandraisana Dulcolax miaraka amin'ny antacid, H2 blockers, ary proton proton dia mety hahatonga ny fonosana enterika hamongorana aloha loatra ka mitarika fahasosorana amin'ny vavony na dyspepsia. Dulcolax dia tokony halavirana tsy mitantana ireo fanafody ireo adiny iray farafahakeliny.
Ity dia tsy natao ho lisitry ny zava-mahadomelina rehetra mety hifandray amin'ny zava-mahadomelina. Azafady mba manatona ny farmasia na ny mpitsabo anao momba ny lisitra feno.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina mofo Dulcolax
Calcium carbonate Antacid tsy ENY
Diphenoxylate Antidiarrheal tsy ENY
Hydrocodone Manala fanaintainana tsy ENY
Nizatidine H2 Blockers tsy ENY
Torsemide Diuretika tadivavarana ENY ENY
Menaka mineraly Laxatives ENY ENY
Lansoprazole Mpanakana paompy proton tsy ENY
Fampitandremana amin'ny Colace sy Dulcolax
Tokony hiresaka amin'ny dokotera alohan'ny hampiasana Colace na Dulcolax ianao raha sendra marary maloiloy na mandoa na marary vavony. Tokony hijery ny mpitsabo anao koa ianao raha nisy fiovana tampoka teo amin'ny tsinay izay naharitra roa herinandro mahery.
Rehefa mandray Dulcolax dia mety hitranga ny fikorontanana sy ny kibo. Aza manorotoro na mitsako ny takelaka Dulcolax, ary aza maka Dulcolax ao anatin'ny adin'ny adiresy na ronono adiny iray. Raha tsy mihetsika ny tsinainao na miaina rà mandriaka na mihombo rehefa avy nihinana Dulcolax dia ajanony ny fakana azy dia antsoy ny dokoteranao.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Colace vs. Dulcolax
Inona no atao hoe Colace?
Colace dia mpanamory fipetrahana eny ambonin'ny latabatra ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny fitohanana. Colace dia misy amin'ny kapila malefaka 50 mg sy 100 mg am-bava ary vahaolana 10 mg / ml ary 60 mg / 15ml.
Inona ny Dulcolax?
Dulcolax dia laxative manaitaitra ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitohanana tsindraindray. Dulcolax dia azo alaina ao anaty takelaka 5 mg sy 10 mg mifono enteric ary koa suppository 10g rectal.
Mitovy ve i Colace sy Dulcolax?
Na dia samy ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitohanana aza i Colace sy Dulcolax, dia tsy mitovy izy ireo ary tsy miasa amin'ny fomba mitovy. Colace, mpanalefaka ny seza, dia manampy amin'ny fanalefahana ny fipetrahana mba hahamora ny fandalovana. Dulcolax, laxative manaitaitra, dia miasa amin'ny alàlan'ny fanahafana ny fihetsiky ny seza amin'ny alàlan'ny lalan-dra.
Tsara kokoa ve i Colace sa i Dulcolax?
Dulcolax dia mamoaka fihetsiketsehana tsinay haingana kokoa noho i Colace, miaraka amin'ny endrika supository miasa ao anatin'ny adiny iray na mahery eo amin'ny fitantanan-draharaha. Colace dia malefaka kokoa ary tsy dia mahazo aina firy, fa mety haharitra telo andro vao hanamaivanana.
Afaka mampiasa Colace na Dulcolax ve aho rehefa bevohoka?
Ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA) dia tsy nanendry sokajy fiarovana ny fitondrana vohoka any Colace. Colace dia nifandraika tamin'ny tranga sasany tamin'ny tsy fahampian'ny foetus, ary noho izany dia tsy tokony hampiasaina raha toa ny tombony azo noho ny loza mety hitranga. Dulcolax dia tsy naneho vokatra tsy faniry ary heverina ho azo antoka amin'ny fampiasana fotoana fohy amin'ny fitondrana vohoka. Ny lanjan'ny tsy fahampian-drano sy ny tsy fifandanjan'ny electrolyte dia tokony holanjaina rehefa manapa-kevitra momba ny fitsaboana ny fitohanana amin'ny vehivavy bevohoka, ary ny mpitsabo azy ireo dia tokony hanontaniana foana.
Afaka mampiasa alikaola ve i Colace na Dulcolax?
Na dia tsy misy fifandraisana mivantana amin'ny alikaola aza, ny vokatry ny alikaola amin'ny rafi-pandevonan-kanina dia mety hampitombo ny tsy fahampian-drano, ary tokony hitandrina rehefa mandray Colace na Dulcolax rehefa misotro toaka.
Dulcolax ve malefaka?
Ny famolavolana dulcolax misy bisacodyl dia heverina ho laxatives manaitaitra, fa tsy malefaka amin'ny seza. Misy softeners amin'ny seza azo ampiasaina amin'ny anaran'ny varotra Dulcolax.
Inona no maha samy hafa ny fanamainana fivalanana sy ny laxative?
Ny mpanamory fivalanana dia miasa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fihenjanan'ny solika sy rano ao anaty fitoeran-tany. Izy io dia misarika hamandoana fanampiny ao amin'ny fipetrahana, ka lasa malemy sy mora mandalo izy io. Ny laxatives dia miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ara-batana ny fivezivezena ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina, izay manetsika ny seza amin'ny alàlan'ny lalan-dra mandevon-kanina.
Milamina ve ny fakana fanamainana fivalanana isan'andro?
Ny fanamainana stol dia azo alaina isan'andro eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsabo iray momba ny fahasalamana amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny fitohanana maharitra. Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny famantarana ny tsy fahampian-drano sy ny fivalanana mitohy.
Inona no atao hoe tsy fandeferana lactose? Antony sy soritr'aretina, nohazavaina
Inona ny Cialis? Ary ampiasaina amin'ny inona izy io?
mitovy amin'ny menaka trondro ve ny vascepa?
inona no tsara amin'ny maloiloy rehefa bevohoka
hafiriana aorian'ny fisotroana gabapentin no ahafahanao misotro toaka
mety ve ny maka ibuprofen mandritra ny fitondrana vohoka
ohatrinona ny vidin'ny pilina cialis